About Us - Steel ny Siansa sy Teknolojia Co., Ltd
Light vy Villa
Foamed trano simenitra
Shandong Steel Fanorenana Tech Co., Ltd. mpikambana ao amin'ny sampan-draharahan'ny varotra endrika vy eo ambanin'ny vondrona Shandong. Ary dia naorina teo an Aprily 2018. Renivohitra Ny voasoratra anarana dia telo tapitrisa yuan. Izahay dia orinasa anjara amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana sy ny famokarana vy rafitra mazava trano. Isika indrindra indrindra hirotsaka amin'ny varotra sy ny famolavolana ny trano efa voarafitra mialoha, trano fitoeran-javatra, mazava vy Villa, fefy sy stockade, ary ny vy rafitra vokatra. Manana matihanina trano famolavolana ekipa, ary handray "efa voarafitra mialoha, fiarovana ny tontolo iainana, angovo famonjena, aina, tsara, fanompoana", araka ny fototra sarobidy, rehetra miorina amin'ny fepetra takiana ny mpampiasa, dia ataovy aloha samy hafa teti-dratsy ho an'ny hafa mpanjifa, ary manome trano mety indrindra ho an'ny mpanjifa.
Aoka ianareo ho an'izao tontolo izao indrindra mpamatsy niavaka ny trano efa voarafitra mialoha vahaolana.
Mba manome mpanjifa amin'ny efa voarafitra mialoha, maitso, teknolojia avo-trano vahaolana sy ny tolotra, ho fanavaozana hatrany ny mahasoa ny mpanjifa sy mamorona zava-dehibe ho an'ny mpanjifa continuously.We ny hanao izay namorona tetikasa kalitao ho an'ny mpanana petrabola, mpanjifa, mpiasa sy ny fiaraha-monina.
Trano vy no be mpampiasa ao amin'ny:
Residence, Villas, Multi-rihana, High- Mitsangàna, Ambanivohitra trano fonenana sy ny toeram-panorenana Rental birao, efitra Accommodation Field portable fitaovana sy ny efitrano fandidiana ho an'ny tetikasa goavana toy ny angovo sy minerals.Municipal sy hanomezana toeram-ponenana ny trano fonenana ho an'ny kaominina trano, fizahan-tany, ny fanatanjahan-tena , fampirantiana sy ny ara-barotra goavana activities.Military Housing mpiambina boaty, mpiambina trano, Lounge trano, trano fidiovana, etc.Office trano, tranom-panjakana, sekoly sy akanin-jaza, Restaurants, sns beadhouse ary azo ampiasaina avy hatrany.
Ny orinasa dia nanao ny fampandrosoana, ny famokarana, fivarotana, fametrahana sy ny fanompoana ao maitso trano efa voarafitra mialoha, ary koa ny fivarotana ny fiarovana ny tontolo iainana vaovao fitaovam-panorenana.